पुष १, २०७७ निलम पंत
चितवन खैरेनी नगरपालिका ५ निवासी गणेश गजुरेल तथा आमा गंगा गजुरेलको ५ सन्तान मध्येकी कान्छी छोरी हुन् यशोदा गजुरेल । अफिस फाइलदेखि स्कूल ब्यागसम्म तयार गर्ने उद्योग समेत खोलिसकेको गजुरेलको जन्म २०४२ जेठ ५ गते भएको हो । सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएकी यशोदा गजुरेल एक गृहिणी महिला भएर पनि अहिले यशोदा ब्याग तथा रेडिमेड उद्योगकी संचालिका भइसकेकी छन् । जो सफल उद्यमी महिलाको रुपमा परिचित छन् । २ सन्तानकी आमा गजुरेल विगत डेढवर्षदेखि आफ्नै उद्योग संचालनमा सकृय छन् । फजुल खर्च नगरी बचत गर्ने बानीले उनलाई औद्योगिक नगरीमा उद्यमी महिलाको रुपमा स्थापित हुन बल मिलेको उनको तर्क छ । श्रीमानको कमाइमाभन्दा आफ्नै कमाइमा रमाउने गजुरेलले चितवनको खैरेनी स्कूलबाट प्लस टु सम्म अध्ययन गरेको बताइन् । यशोदा ब्याग तथा रेडिमेड उद्योगको संचालिका गजुरेल एक उद्यमी महिला मात्र नभई आफ्नो समुदायको लागि उदाहरणीय पात्र समेत बन्न सफल भएकी छन् । उनी महिला उद्यमी यशोदा गजुरेलसँग वर्तमान अवस्थाका बारेमा गरिएको कुराकानी :
१) कोरोनाले प्रभाव पारेको वर्तमानमा कसरी काम भइरहेको छ ?
खासगरी स्कूलकै ब्याग धेरै बनाउने भएकोले देशभरी नै स्कूल बन्द हुँदा उद्योगलाई अफ्ठ्यारो नपर्ने कुरा भएन । कुनै–कुनै संघ–संस्था, कम्पनीहरुले पनि ब्याग अडर गर्नु हुन्थ्यो । उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने गरी धेरै घाटा त लागेन । तर उद्योगमा थप रकम नथपि पनि भएन । लकडाउन हामीलाई मात्र होइन । पुरै विश्वभरी नै आर्थिक मन्दी छाएको छ । त्यसैले त्यसलाई सामान्य रुपमा नै लिएको छ ।
२) आम्दानी नै कमि हुने अवस्थामा थप लगानी बढाउनु प¥यो त ?
हाम्रो ब्यागको सिजन वैशाख तिर हो । विचमा बन्द नै भयो । कामको साथसाथै व्यापार पनि बन्द भयो । विक्रि–वितरण, उत्पादन सबै बन्द भयो । ती बनेका सामानहरु अब चाहि आठ महिनाको लकडाउन पछि स्कूल खुलेसंगै बजारमा पठाउने काम हुँदैछ । समग्रमा भन्नु पर्दा हाम्रो काम बल्ल सुचारु भएको छ । अडरहरु आउँन थाल्यो । नयाँ मेटेरीयल सामानको लागि केही पैसाहरु थप्नुप¥र्यो । आठ महिना आम्दानी नहुँदा र उद्योगबाट विचविचमा विक्री भएकै पैसाले खर्च चलाउनु प¥र्यो । जस्ले गर्दा अहिले यस्तो सानो उद्योगले समेत ८–१० लाख सम्म लगानी पूनः बढाउनु प¥यो ।
३) उद्यमीहरुको समग्र कुरा गर्दा पर्सा जिल्लामा कस्तो अवस्था छ ?
पर्सा जिल्लाका महिला उद्यमीहरुको अवस्था राम्रो छैन । किन भने महिलालाई घरको काम, उद्योगको काम, बालबच्चाहरुको स्याहार–सुसार यी सबै गरेर फ्रि समयमा काम गर्नु पर्दा अवस्था जटिलै छ । त्यही पनि महिलाहरु सघषर््ाशिल नै हुनुहुन्छ । आफुले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेर अगाडी बढेको अवस्था हो ।
४) लकडाउन पश्चात कुनै संघ–संस्था वा निकायले सहयोग गरेको छ कि ?
नेपाल घरेलु महासंघ र नेपाल राष्ट्र बैंकले भएको जति उद्यमीलाई फेरी थप कर्जाहरु दिने भनेर भनेको थियो । तर त्यो भनाइ मात्र भयो । यो लकडाउनमा पनि हामीले किस्ता, ब्याजहरु खोजेर पनि तिरिरहेका छौं । कहि कतैबाट छुट पाएका छैनौं । हामीले पैसा लिइसकेपछि तिर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो । लगानी गरेको छैन । हामीले कहिबाट पनि सहयोग लिएका छैनौ ।
५) उद्योग संचालनको सोच कसरी बनाउनु भयो ? यसको श्रेय र प्रेरणा कहाँबाट पाउनु भयो ?
म विवाह गरेर आउँदा नै मेरो श्रीमानले यो उद्योग संचालन गर्दै हुनुहुन्थ्यो । यहाँ आएपछि मैले बाहिर गएर सिप सिक्नु पर्ने अवस्था परेन । यहि सिप सिक्ने अवसर पाए । मैले पनि सिप सिके । मैले पनि गर्नु पर्दछ भन्ने सोच विकास गरें । साथै सहयोग पनि साथसाथै पाउँछु भनेर अलग्गै गर्ने सोच आयो । मेरो श्रीमानसंग यो प्रस्ताव राखें तर साथ र सपोर्ट धेरै दिनु भयो । श्रीमानको प्रेरणा र सहयोगबाट नै आज यो अवस्थासम्म आइपुगेको हो ।
६) पर्सा जिल्ला बाहेक हाल कुन–कुन ठाउँमा समान पठाउँदै हुनुहुन्छ ?
खास भन्ने हो भने जिल्ला बाहिर नै हो । जिल्ला भित्र कहिले काही मात्र सामान जान्छ । बाहिरभन्दा बुटवल, भैरहवा, धनगढी, नेपालगंज, महेन्द्रनगर बढी पश्चिमी जिल्लाहरुमा जान्छ ।
७) यो उद्योग सुरु गर्दा कति जनाबाट सुरु गर्नु भयो ? हाल कति जनाले रोजगारी पाइरहेका छन् ?
पहिला ७ जना हुनु हुन्थ्यो । घरेलु कार्यालयबाट २० प्रतिशत र आफ्नो ८० प्रतिशत लगानीमा संचालित यो उद्योगमा अहिले ११ जना मानिस थपिएको छ ।
८) तपाई महिला त्यसमा पनि पुरुष सरह कार्य गर्दा कतिको गाह्रो छ ?
गाह्रो त भइहाल्छ नि । जटिल चुनौती छ । महिलालाई सहज छैन । तै पनि हिम्मत हारेको छैन । आफ्नो सकृयता र लगनशिलता निरन्तर छ । विश्वासको भरमा यो व्यवसाय गर्नु पर्छ । त्यसमा अरुको साथ र सहयोग लिन पनि छोड्नु हुन्न ।
#केही प्रगति #अगाडी बढ्नु पर्छ
बुधवार, पुष १, २०७७, १२:१२:००
कार्तिक ७, २०७७ निलम पंत
नगरपालिकाको चौतर्फी विकासको लागी अहोरात्र खटिरहेका छौ : बहुदरमाई नगर प्रमुख नितेन्द्र साह आरोपमुक्त को नै छ र ! हाम्रो नगरपालिकामा कमिसनको कुरा छैन् ।
आश्विन ३०, २०७७ निलम पंत